Aluminium Aerosol Can, Dhalada Aluminiumka Dheecaanka ah, Dhalada Saliidda Sunta Muhiimka ah - Weligeed Iftiin
EBI waxay ku takhasustay bixinta xirmooyin dhalo oo jilicsan oo loogu talagalay alaabada qurxinta qurxinta, Qamriga, saliida Muhiimka ah, Isticmaalka maalinlaha ah, Kordhinta Hadiyadaha iyo wixii la mid ah oo macquul ah.
Warshaddeenu waxay ka gudubtay kormeerka warshadaha ee ISO iyo WCA, oo leh wax kabadan 1 milyan oo dhalo wax soo saar bishii. Kooxda EBI waxay taageeri kartaa adeegyada hal-joogga ah laga soo bilaabo qaabeynta farsamada ilaa santuuqa xirmada si loo gaaro Iibsiga fudud.
Muddo 10 sano ah diiradda saar warshadaha oo u hoggaansan fikradda Abuur Qiimaha Macaamiisha iyo Shaqaalaha. Waxaa laga shaqeeyay "Fragrancenet", "S centbird", "Caron", "Mane" ， "Belk" iyo wixii la mid ah.
ebi eco XAALADAHA XAALADAHA
bay'ad saaxiibtinimo naqshad leh naqshad leh ...
Daabashada shaashadda Safarka moodada noocyo kala duwan oo moodada ...
Bixinta Degdegga ah ee Nadiifinta biiyaha bilaa Biiyaha ah ee Gel Ha ...
Dhalada Kariimka ah ee Sunta La Kari Karo Oo Aad U Wanaagsan ...
by admin Mar-27-2020
Sida loo isticmaalo gacmo nadiifiyaha c ...
Maalmaha uu fayrasku ku badan yahay, adeegsiga nadiifiyeyaasha bakteeriyada gacanta lagu buufiyo ayaa qayb ka noqonaya ...
Maxaa u dhexeeya m ...
Maaskarada qalliinka caafimaadku waxay go'doomi karaan walxaha waaweyn sida dhibcayaasha, iyo lakabka dibedda ee waa wat ...
Bishii Febraayo 24, 2020, kadib in ka badan hal bil oo go'doon ah, shaqaale kasta oo ka tirsan EBI ayaa yimid ...
Khadka Tooska ah ee Automoat-ka-bilaashka ah ee Warshadaha
Taageer 1-9 Midab Casri daabacan